K: လက်ယာ အန္တရာယ်
ကိုမိုးသီးဇွန် ရဲ့ဘလော့မှာ ကားလမ်း တွေမကောင်းတဲ့ အကြောင်း ခရီးသွား တွေ လုံခြုံ စိတ် ချမှု မရှိ တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရရင် ဒါတွေ ချက်ချင်း ပြင်ရမယ် ဆိုတာ ဖတ်ရလို့ ဒီမိုကရေစီရရင် ပြင်ရမဲ့ နောက်အချက်ကလေး တစ်ခုကို တင်ပြ ပေးချင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အဝေးပြေး ခရီးလမ်း တွေမှာ လက်ယာ ကပ်မောင်း စနစ်ကြောင့် ယဉ်တိုက်မှု တွေ အသက် ဆုံးရှုံးမှုတွေ ပိုမို ဖြစ်စေရတဲ့ အကြောင်းပါ။
နိုင်ငံတကာ မှာတော့ ယဉ်ကြောမှာ လက်ဝဲ ကပ်မောင်း စနစ်ကိုသာ အများစု ကျင့်သုံး ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကားတွေမှာ ဒရိုင်ဘာ ထိုင်တဲ့နေရာ ဟာ ကားရဲ့ လက်ယာ ဘက်မှာ ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ (ရှေ့ကားကို ကျော်တက် လိုတဲ့အခါ လက်ယာ ဘက်က ကျော်ရမှာမို့ ပိုမို အဆင်ပြေ စေပါတယ်)
ခရီးသည် အတက် အဆင်းလုပ်တဲ့ အပေါက်ဟာ ကားရဲ့ လက်ဝဲဘက်မှာ ဖောက် ထားပါတယ်။ (လက်ဝဲ ကပ်မောင်း စနစ်ဖြစ်လို့ ဆင်းတဲ့ ခရီးသည် တွေဟာ ကားလမ်းမပေါ် ဆင်းစရာ မလိုပဲ ကားပေါ်က ဆင်းတာနဲ့ လမ်းဘေးကို လုံခြုံ စိတ်ချစွာ ရောက်စေ ပါတယ်။)
ကျမတို့ မြန်မာပြည်မှာ ၁၉၇၁ ခုနှစ်ကစလို့ ဦးနေ၀င်း ရတြာ ခြေမှုကြောင့် ကားယဉ်ကြောမှာ လက်ျာ ကပ်မောင်းစနစ် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။(လက်ဝဲ သမားတွေကို နံနှိမ်တာဆိုလား..ဘာလား)
သည်လို ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ စနစ်အောက်မှာ နိုင်ငံခြားက တင်သွင်း လာတဲ့ ကားတွေ (အထူးသဖြင့် အဝေးပြေးလမ်း သုံး ဘတ်စ်ကား တွေ) မှာ ကားတွေရဲ့ဒီဇိုင်း ကို ပြန်မပြင်ပဲ သုံးတဲ့အခါ အလွန် အန္တရာယ် ကြီးနေပါတော့ တယ်။
ကားမောင်းသူဟာ ရှေ့က ကားကို ကျော်တက် ချင်တဲ့အခါ လမ်းကို ရှင်းလင်းစွာ မမြင်ရတော့ပါဘူး။ စပယ်ယာရဲ့ ညွှန်ကြားတဲ့ အသံကိုသာ နားထောင်ပြီး လမ်းရှင်းပြီ ကျော်ဆိုမှ ကျော်ရပါတော့တယ်။ ရှေ့က ကား ကလည်း အချက်ပြ မီးကိုမှန်မှန် မပြ ..စပယ်ယာ ကလည်း လုပ်ငန်းမှာ မကျွမ်းကျင်သူ၊ ပေါ့ဆ သူဖြစ်ရင်၊ ဒရိုင်ဘာဟာ ဂရုစိုက် မောင်းသော်လည်း မတော်တဆ ယဉ်တိုက်မှု တွေ ဖြစ်စေ ပါတော့တယ်။ သည်စနစ်မှာ စပယ်ယာဟာလည်း ကားပေါ်က ခရီးသည်တွေ အဆင်ပြေဖို့ စီစဉ်ရ၊ ယဉ်ကြောကို အာရုံစိုက်ရနဲ့ အလုပ်ပိုတွေ လုပ်ရပါတယ်။ အဝေးပြေး ကားတစ်စီးမှာ အနည်းဆုံး စပယ်ယာ ၂ ယောက် လောက်ပါမှ အလုပ်ဖြစ် ပါတယ်။(လုပ်အား အပို သုံးရခြင်းပါ)
နောက်တချက်... ခရီးသည်တွေ အတက်အဆင်း လုပ်တဲ့ အခါ အပေါက်ဟာ လမ်းဘက် မှာပဲ ဖြစ်နေတာမို့ လမ်းပေါ် ကိုပဲ ဆင်းကြ ရပါတယ်။ နောက်ဘက်က လာတဲ့ကားတွေ နဲ့ တိုက်မိဖို့ ရာခိုင်နှုန်း ကိုးဆယ် သေချာနေ ပါတော့တယ်။ ကလေး မိခင် တွေများဆို အထုပ်အပိုး တဘက် ကိုယ့်ကလေး လမ်းပေါ် တက်သွားမှာ စိုးရိမ်ရတာ တဘက်နဲ့ တော်တော် ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အဝေးပြေး ခရီးသွားတဲ့ သူတိုင်း ကြုံဖူးမှာပါ။
သည်လို အမှတ်တမဲ့ အရေးမကြီးဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ လက်ဝဲ လက်ယာ ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတဲ့ စနစ် တခုကြောင့်ပဲ တနှစ်တနှစ် အသက် ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဘယ်လောက် များနေမလဲ။
(စာကြွင်း။............လက်ယာ ကပ်မောင်း စနစ်မှာ ကြီးပြင်း လေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ မိတေဖိုး လည်း နိုင်ငံရပ်ခြား တစ်ခု ရောက်ခါစမှာ လမ်းကူးတော့ ကိုယ့်ဘယ်ဘက် ကိုအရင် ကြည့်ပြီး ကားရှင်းပြီ ထင်ပြီး ကူးလိုက်တာ လက်ဝဲ ကပ်မောင်း စနစ်နဲ့ မောင်းလာတဲ့ ကားရဲ့ ဟွန်းသံရှည်ကြီးနဲ့ ဘရိတ်အုပ်သံ အကျယ်ကြီး ကြားလိုက် ရဖူးပါတယ်။ မြန်မာပြည် မှာ လိုတော့ ဒရိုင်ဘာက ခေါင်းထွက်ပြီး ဆဲသွားတာမျိုး မလုပ်သွားလို့ တော်ပါ သေးရဲ့)
Around 25 years ago Burma (Myanmar) actually did this in Rangoon (Yangon). They upgraded the bus service withafleet of second hand buses from Bangkok, ignoring the fact that Thailand drives on the left and Burma on the right. The conductor on the bus stopped traffic while the passengers got on and off. It actually seemed to work, although it representedamajor traffic holdup.
Perhaps the state government is thinking of emulating the military junta in Burma?
Posted by: John Denham 9:23am today
Labels: cartoons , Things to Ponder , မိတေဖိုး
Burma needs to produce or import the right model of cars :)
Honestly, I prefer to drive on the right side of the road :)
ဟုတ်တယ်လွင်မိုးရေ... တကယ်ဆို..စက်မူဇုံ ကား တွေကို.. လက်ယာ စနစ် ထုတ်လိုက်ပေါ့..ဟဟ..ခက်တာက.. ရှမ်းစတာ..စက်မူ ဇုံဆိုတာ.. ဗမာပြည်ထုတ်ကား မှ..မဟုတ်တာ..။ ကြက်တန်းက..ကုန်ကြမ်းနဲ့..၀ပ်ရှော့မှာ ထု ထား တာ ဆိုတော့..လည်း.. ရှိစေတော့။း))
i read ur post, (နိုင်ငံတကာ မှာတော့ ယဉ်ကြောမှာ လက်ဝဲ ကပ်မောင်း စနစ်ကိုသာ အများစု ကျင့်သုံး ကြပါတယ်။) i disagree with u.
u can easily find out which one(right or left) is used most in earth.
Because of we mostly used ,in our country, cars from japan. They r not designed for us.
Nothing But Sharing.
It might be true. I'm not so sure that right is much more common than left.
As far as I known, Phillipine is also one the right country like Burma. But the thing we want to highlight is all venhicles should be customised according system it used. If we could not import specific designed car or consider to import only Japan car, why should it changed to right system.
That's what we think..but we really love to see your thoughful and precise comments.
By the way.. this post was not written by me.. but one of my close buddies.. of cos :-)
Yours, Ma Kay
လက်ဝဲဘာကပ်မောင်းတာကနေ လက်ညာဘက်ကပ်မောင်းတာ ပြောင်းတာ တော်တော် အရင်းအနှီးကြီးခဲ့ပါတယ်။ ကားတွေက ပြောင်းကာစမှာ ရှောင်ရင်းတိမ်းရင်း ဘက်မှား မောင်းကြလို့ တိုက်မိပြီး အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ အများကြီးလို့ သိခဲ့ရပါတယ်။
လက်ညာဘက်ကပ်မောင်း စနစ်သုံးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို လက်ဝဲဘက်ကပ်မောင်းတဲ့ ဂျပန်က တပတ်ရစ် ကားတွေ ကိုသွင်း၊ မပြင်ဆင်ပဲ မောင်ခွင့်ပေး တော့ ယာဉ်တိုက်မှုတွေ ဖြစ်ကြပြီး အသက်တွေဆုံးရှုံးကြပြန်ရော။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြောင်းခဲ့တာက ယတြာဆိုရင်တော့… ယစ်ပူဇော်မှုတခုလို့ပဲမြင်မိတယ်…
လက်ဝဲကပ်မောင်းတဲ့ စနစ်ကို အင်္ဂလိပ်က ကျင့်သုံးတော့ နိုင်ငံတော်တော်များများက အဲဒီစနစ်ကို သုံးပါတယ်။ အမေရိကန်ကတော့ အင်္ဂလိပ်ကို ဆန့်ကျင်တော့ လက်ညာဘက် ကပ်မောင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး တောင်ကိုးရီးယားလည်း လက်ညာဘက်ကပ်မောင်းပါတယ်။
ဒိန်းမတ်မှာ ညာမောင်းပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံက ကျင့်သုံးတဲ့ စနစ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ကားကိုပဲ တင်သွင်းမှသာ အဆင်ပြေမှာပါ။ မြန်မာပြည်မှာက လူတွေကို အဆင်မပြေ အောင်လုပ်တဲ့ နေရာ မှ ဧတဒဂ် ရတဲ့ အစိုးရမင်း များ အုပ်ချုပ်တာ ဆိုတော့ ...
အဟက်.. လက်ယာအန္တရယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပြီး အော်ကွန်မြူနစ်မကောင်းကြောင်းကြီးပဲရေးတာ ဖတ်ခဲ့ရတော့ ဒီတစ်ခါထူးဆန်းတယ်ပေါ့ ..မှန်းချက်က ဟီးဟီး ..